Sintra, inona no ho hita sy atao ao amin'ny tanàna Portiogey | Vaovao momba ny dia
Sintra, inona no ho hita sy atao ao amin'ny tanàna Portiogey
Susana Garcia | | General, Portiogaly, Inona no ho hita
Ity tanàna kely Portiogaly ity dia antsasak'adiny monja avy any Lisbon dia manana zavatra betsaka hatolotra ho an'ireo izay manapa-kevitra ny handany andro roa any. Tsy isalasalana fa fantatra ho azy io lapa taloha, saingy misy zavatra betsaka kokoa ho azy, manomboka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ka hatramin'ny trano taloha ary ny gastronomika lehibe.
Lazainay aminao ny zavatra ho hita sy hatao ao amin'ny Tanànan'ny Portiogaly Sintra, toerana iray izay mora azo avy any Lisbonne ary manolotra lapan'ny angano tsy mitovy amin'ny an'ny hafa, ary ambonin'izany rehetra izany ny tantara sy kolontsaina Portiogey. Tsy tokony hiala amin'ny fitsidihana ity toerana ity isika raha any Lisbonne.
1 Ahoana ny fomba hahatongavana any Sintra
4 Lapan'i Quinta da Regaleira
5 Lapan'ny firenena Sintra
6 Valan-javaboary voajanahary Sintra-Cascais
7 Lapan'i Monserrate
8 Convent an'ny Capuchos
Ahoana ny fomba hahatongavana any Sintra
Ny safidy be mpampiasa indrindra hahatongavana any Sintra, raha tsy avy any avaratra ianao dia ny mandeha any Lisbon amin'ny alàlan'ny fiaramanidina ary mitsangatsangana an-tongotra mankany amin'ity tanàna ity, satria manodidina ny 30 kilometatra ny halavany. Azonao atao mandehana fiara avy aty an-drenivohitra avy amin'ny IC19 sy ny N6. Ny mety hafa dia ny mitaingina lamasinina ao an-tanàna mba hahatongavana any Sintra amin'ny antsasak'adiny. Ny fiaran-dalamby dia azo tratra amina tobim-piantsonana isan-karazany, toa an'i Rossio na Sete Ríos.
Tsy isalasalana fa io no tsangambato mampiavaka indrindra ao an-tanànan'i Sintra. Ity Palacio da Pena ity dia toa angano, miaraka aminy mahavariana maro loko, tsy mitovy amin'ny lapa rehetra mahazatra antsika. Izy io dia natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX, noho izany ny maritrano am-boalohany, satria tsy dia antitra loatra, ary eo amin'ny tendrombohitra Sintra no misy azy, koa voahodidin'ny tontolo voajanahary tsara tarehy. Raha afaka milaza na inona na inona momba an'ity lapa ity isika dia ny eclecticism no tena endriny. Afangaro ny fomba sy ny hevitra maro hamoronana zavatra tsy manam-paharoa sy hafa. Amin'ny diantsika dia hahitantsika ireo motif izay mampahatsiahy antsika ny fomba Mudejar, Baroque na Gothic. Monastera ity toerana ity tamin'ny voalohany, saingy rehefa nifindra tany Lisbonne ireo moanina dia nividy ny rava i King Ferdinand II mba hamoronana ity lapa ity ho fanomezana ho an'ny vadiny.
Raha efa nitsidika ny Palacio da Pena isika dia anjaran'ny Castelo dos Mouros, izay tratran'ilay antsoina hoe Rampa da Pena an-tongotra. Ity dia a Enclave fiarovana arabo tamin'ny taonjato faha-XNUMX, izay azo tsoahina amin'ny toerana avo sy ny rindrina. Amin'ny fotoany dia tsy maintsy ho toerana tsy hay tohaina izy io. Ao amin'ity lapa ity dia ampahany amin'ny rindrina no voatahiry. Ao anatiny dia afaka mahita trano fiangonana natokana ho an'i Saint Peter koa isika.
Lapan'i Quinta da Regaleira
Misy toerana iray hafa izay mampiseho ny tantaram-pitiavana ao Sintra. Fa efa renareo tokoa ny Quinta da Regaleira sy ny lavadrano fanombohana. Ity lapa ity dia tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX ary amin'ny manodidina azy dia afaka mankafy lapa ianao, tilikambo, zaridaina, fantsakana tsy fantatra ary trano fonenana. Trano tranombakoka ity lapa ity ankehitriny ary natsangany tamin'ny fomba sy fironana samihafa. Ato amin'ny vala dia azonao atao ny mahita andinin-teny momba ny Templars sy ny Freemason, satria ny tompony dia ao anatin'ny baiko any Portugal. Mila mitsidika ny fantsakana tsara ianao, fa mankafy ny zaridaina mahaliana koa, izay misy tionelina miafina na riandrano.
Lapan'ny firenena Sintra
Ity lapa ity dia ao anatin'ny Lova Iraisam-pirenena UNESCO. Androany dia manana fomba fanao an'i Manueline izy ary miavaka amin'ireo fivoaran-tsetroka roa izay mampahalala azy azy. Tokony holazaina fa tamin'ny fiandohany dia nanana fomba arabo fa nohavaozina. Azontsika atao ny mitsidika azy io ao anatiny ary mankafy taila taloha tsy mampino, ireo taila izay tena mahazatra an'i Portugal. Hiditra ao amin'ny Capela Palatina isika miaraka amin'ny mozika fitaomana arabo, ny Sala das Pegas na ny Sala dos Cisnes, izay nanaovana fety.
Valan-javaboary voajanahary Sintra-Cascais
Ao anatin'ity valan-javaboary goavambe ity dia afaka mankafy morontsiraka sy Cape of Roca, ny teboka farany andrefan'ny kaontinanta eropeana. Ny iray amin'ireo morontsiraka malaza indrindra dia i Playa Grande, fa misy hafa kosa eo amorontsiraka, toa an'i Adraga. Misy ihany koa ny tambajotra marobe izay azo aleha ho an'ireo mankafy ity karazana fanatanjahan-tena ity.
Raha manam-potoana isika dia afaka mitsidika ity lapa ity, izay a trano fonenana fahavaratra an'ny aristokrasia. Ao anaty no ahitantsika ny fitaomana arabo sasany, izay efa hita eo amin'ny tohanan'ny varavarankely. Tsy dia lehibe loatra izy io, ka azo tsidihina haingana. Aza adino ny faritra misy ny zaridaina ivelany, tena karakaraina sy malalaka.
Convent an'ny Capuchos
Ity trano fivarotana ity dia ao anatin'ny valan-javaboary voajanahary, noho izany dia tsy maintsy raisinay ny fiara mankany aminy, satria kilometatra vitsivitsy miala ny afovoany izy io. Toerana mahafinaritra izy io, na dia tsotra aza ny endrika ivelany, raha jerena ny fahantran'ny moanina Fransiskanina nonina tao. Saingy ny hatsaran-tarehiny dia omena izany fikitihana ny mistery izany sy ny tontolo voajanahary manodidina azy ary toa tafiditra ao anatiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Sintra, inona no ho hita sy atao ao amin'ny tanàna Portiogey
Tsidiho ny sisa tavela ao Herculaneum
Ahoana ny fomba hahazoana visa any Aostralia